जहाँ बाहुन त्यहाँ विनाश ! यस्ता छन् इतिहासका घटनाक्रमहरु - नेपालबहस
‘सटडाउन’ ‘लकडाउन’भन्दा के फरक छ ?
रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा शीतल निवास पुगे मन्त्रीहरु
प्रधानमन्त्रीको कोरोना रिर्पोट नेगेटिभ
क्‍वारेन्टाइनस्थलमा युवतीले गरिन आत्महत्या
नेपाल एसबीआई बैंकका डेविट कार्ड हाेल्डरलाई सोल्टी हाेटलमा विशेष छुट
टाटा ब्राण्डका कार खरिदमा ६ महिनासम्मको किस्ता छुट:- एनआईसी एशिया बैंकले दिन्छ ऋण
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई हाउस अफ ईन्टेरियरको सेवामा आर्कषक छुट
प्राधिकरणको ४१ अर्ब ११ करोड बजेट बिनियोजन, निर्माणाधीन अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकता
सुकेधाराबाट हात्तीको दाह्रासहित ३ पक्राउ
प्रिय सरकार, उपदेशले पेट भरिदैन !
बीपी साहित्य सम्मान नेपाललाई र बीपी सेनानी सम्मान दाहाललाई
प्रदेश नं २ : ३१ महिलासहित १७९ जनामा काेराेना पुष्टि
कोरोनाले आज ५ जनाको मृत्यु, मृत्तकको संख्या ७३ पुग्यो
मुख्य प्रशासनिक भवनमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक
सीपीएल खेल्न गएका सन्दीपको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
बङ्लादेशका ११ राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीलाई कोरोना
(परिवारका लागि व्यक्ति त्याग्नु, गाँउका लागि परिवार त्याग्नु, समाजका लागि गाँउ त्याग्नु, देशका लागि समाज त्याग्नु भन्ने नीति शास्त्रको बचन रहेको छ । यो पंतिकार आफैमा एक ब्राह्मण भएतापनि ब्राह्मणहरुको राज्यसंयन्त्रमा हालीमुहाली हुँदा जहिलेपनि देश र समाज भ्रष्ट भएको इतिहास रहेको हुँदा ब्राह्मणहरुलाई राज्यसंयन्त्रमा निषेधित नगरेसम्म देशको कल्याण हुन्न भन्ने आशयका साथ यो लेख तयार गरिएको छ । ब्राह्मणको आफ्नै क्षेत्र छ, अध्ययन र अध्यापनको । त्यही क्षेत्रमा सीमित रहेमा यो देश र जनताका लागि र स्वय्म ब्राह्मण समुदायका लागि पनि हितकर हुने देखिन्छ । कुनै जात विशेषलाई अपमान गर्ने र होच्याउने यो लेखको उद्देश्य पनि हैन । कसैसँग मेलखान गएमा यो संयोग मात्र हुने छ । )
शुक्राचार्यले छद्मभेषी बाहुनको भर नपर्न भन्दै बलीलाई आफ्नो यज्ञ निरन्तर गर्न मन्त्रणा गरेका थिए । अंहकारवश त्यो कुरा नमान्दा छद्मभेषी बाहुनले बलीको राज्य मात्र खाएन बरु उनले बस्ने बास पनि पाएनन् र पाताल भाँसिनु पर्यो । विचरा कर्णले आफ्नो गुरुको निद्रा भंग होला भनी बिच्छीको चोट पनि सहेर बसे तर परशुराम नामक बाहुनले तिनै शिष्यलाई श्राप दिए, जसका कारण कर्णले अर्जुनसँगको निर्णायक युद्ध हार्नु पर्यो । एकलव्यले द्रोणाचार्यलाई गुरु थापेको प्रतिफल आफ्नो बुढी औला गुमाउनु पर्यो । यति निर्दयी गुरु यो संसारमा अहिलेसम्म न जन्मेको छ न त जन्मने नै छ ।
गैह्रबाहुन शासकहरु जनताको अधिकतम हितलाई ध्यान दिई जनतालाई न्यनुतम भार पर्ने गरी राज्यका नीतिहरु निर्धारण गर्थे । आज नेपालको राज्यसंयन्त्रमा बाहुनहरुको हालीमुहाली हुँदा जनताहरु खोला तरेको, साइकल चढेको, कुखुराको खोर बनाएको, हाटबजारमा लौका–फर्सी बेचेको पनि कर तिर्न बाध्य छन् ।
बाहुनको संगत गर्नेले कर्ण र एकलव्यको हालत व्यहार्नु पर्ने निश्चित छ । आफ्नो प्रियसीको यादमा टोलाएकी सकुन्तलालाई दुर्वासा नामका बाहुनले दिएको श्रापको पनि कुनै औचित्य नै छैन । आफ्नो प्रियसीको याद गर्नेपनि अधिकार नदिएर श्राप दिई विचरा सकुन्तलालाई दिएको पीडाको कुनै औचिन्य नै छैन । के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने विषयमा जुन भाष्यहरु बाहुनहरुले निर्धारण गरेका छन् , त्यो भाष्य नै समाजको दुर्गतिको कारण बन्न पुगेका तमाम दृष्टान्तहरु इतिहासमा कति भेटिन्छन् कति ।
शासन सत्तामा क्षेत्रीहरुको बाहुल्यता हुँदा जुम्लाको सिंजा साम्राज्य तिव्बतको पठारदेखि हिन्द महासागरको छेउसम्म फैलिएको थियो । जुम्ला दरवारमा जब दक्षिणबाट आएका ब्राह्मणहरुको प्रवेश र प्रभाव बढ्दै गयो र क्षेत्रीहरुको प्रभाव कम हुँदै गयो, सिंजा साम्राज्य पनि कमजोर हुँदै गयो । जुम्लाको दरवारमा बाहुनको चरम प्रभाव पर्दै जाँदा त्यो साम्राज्य टुक्रा–टुक्रा मात्र भएन कालान्तरमा अस्तित्वविहीन हुन गयो । जुम्लाको राज्यकोष चलाख ब्राह्मणहरुले कसरी राजाबाट फुत्काउन सफल भए भन्ने कुरा कसैले जान्न चाहेमा बालकृष्ण पोखरेलले लेखेको पाँचसय वर्ष नामक पुस्तक पढे हुन्छ । राज्य एवं सेनाको हितमा प्रयोग गरिने सारा खेतबारी र स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मणहरुले दान र विर्ताका नाममा कसरी लिन सफल भए भन्ने विषयका धेरै उदाहरणहरु त्यस पुस्तकमा उल्लेख छन् ।
काठमाडौंको मल्ल राज्य पनि उपत्यकामा बाहुनहरुको प्रवेशपछि तहसनहस भएर टुक्रा–टुक्रामा परिणत भयो । सिंगो समाजलाई जातका आधारमा विभाजित गरी सीप भएका जातिलाई पानी नचल्ने जातमा झारी विज्ञान र प्रविधिलाई समाजबाट विस्थापित गरियो । प्रमाण चाहनेले जयस्थिति मल्लका पालामा समाजलाई जातका आधारमा विभाजन गरेको इतिहास पढे हुन्छ, जुन स्थितिका सिद्धान्तकार बाहुनहरु नै थिए । बेलायतको जस्तो समानतामुखी कानुनहरु बनाई मुलुक चलाउँछु भन्ने जंगबहादुरको सपना उनको दरवारका रहेका बाहुनहरुले यसरी तोडमोड गरिदिए कि उल्टो जातका आधारमा नियम कानुन तर्जुमा गरी लागु गर्न लगाए ।
काश्मिरका राजासमक्ष धर्म परिर्वतन भएका तत्कालिन मुस्लिमहरुले हामी त हिन्दू नै हौं, बाध्यताले मुिस्लम भएका हौं , त्यसैले हामी पुनः हिन्दू नै हुन चाहन्छौं भनी निवेदन दिंदा काश्मिरी राजाका दरवारमा भएका गैह्रबाहुन भारदारले यो त अहोभाग्यको कुरा हो, समाज एक हुन्छ भनी मत राख्दा त्यहाँका पंडितहरुले यसो गरियो भने हाम्रो धर्म भ्रष्ट हुन्छ र राजाबाट यस्तो निर्णय भएमा हामी दरवारका अगाडि आत्मदाह गछौं भनी धम्की दिई घरवापसी कार्यलाई बन्देज लगाउन सफल भए । काश्मिरी बाहुनको कुरा नसुनेको भए आज काश्मिर भारतको उत्तराखण्ड र हिमाञ्चल प्रदेश जस्तै देवभूमिको रुपमा परिचित हुन्थ्यो । काश्मिरका बाहुनको कुरो सुन्दा कालान्तरमा राजाको गद्दी पनि गयो, हिन्दूहरुको पलायन पनि भयो । विचरा भारत आज आफ्नो सेना र रक्षा खर्चको दुईतिहाई बजेट त्यही काश्मीरको रक्षाका लागि खर्च गरिरहेको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहलाई उनका मामा पाल्पाली युवराज उद्योत सेनले बाहुनलाई राज्यसंयन्त्रमा छिर्न नदिनु भनी उपदेश दिएर गएका थिए । उनको उपदेश शाहवंशले अनुशरण गरिरहँदासम्म शाहवंश नेपालको शक्ति र श्रद्धाको केन्द्र रही रह्यो । जब राजा त्रिभुवनले क्षेत्री, गुरुङ, मगर लगायतका जातिको भर नपरी ब्राह्मणहरुलाई आफ्ना वरिपरी राख्न थाले त्यसैदिन उनले आफ्नो वंश पतनको विजारोपण गरे । उनले शक्तिमा ल्याएका कोइराला ब्राह्मणहरुले उनको नातिलाई गद्दीच्युत मात्र गरेनन् , शाहवंशीय राजतन्त्रको नै उन्मुलन गरिदिए । राज्यसंयन्त्रमा बाहुनहरुलाई निषेध गर्ने अर्ति नमानेर निजामति प्रशासनमा बाहुनहरुलाई भित्राएको प्रतिफल राणाहरुले पनि मजैले चाखे । जुन जुन बाहुनहरुलाई उनीहरुले दरवारमा आश्रय दिएका थिए तिनै बाहुनहरुका सन्तानले राणाशासनलाई जरैबाट उखेलेर फालिदिए ।
राज्यसंयन्त्रमा बाहुनहरुको प्रभाव बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रपनि ओह्रालो लागेका तथ्यांकहरुले देखाउँछ । नेपालको राज्यसंयन्त्र पुरै बाहुनविहिन भएको बेला अर्थात् नेपाल एकीकरणको कालखण्डमा तिव्बतदेखि भारतसम्मको व्यापारमा नेपालको एकलौटी प्रभाव थियो । नेपालको राज्यसंयन्त्रमा बाहुनहरुको प्रभाव बढ्दै जाँदा मुलुकको निर्यात व्यापार घट्दो र आयात व्यापार बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । हाल आएर नेपालको राज्यसंयन्त्र पुरै बाहुनहरुको कव्जामा भएका बखत देशको निर्यात कुल व्यापारको ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको देशको आठ महिनाको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकले देखाएको छ ।
बाहुनलाई नेपालको राज्यसंयन्त्रमा प्रवेश नै नदिनु भनी पाल्पाली राजा युवराज उद्योत सेनको उपदेश नमानेर पञ्चायतको निजामति प्रशासनमा बाहुनको बाहुल्यता हुँदै जाँदा निजामति प्रशासनमा अनुशासनहिनता र लापरवाही यत्ति चरममा पुग्यो कि बयान गरेर साध्य छैन । डा. हर्क गुरुङ लगायत विकेन्द्रीकरणका विज्ञहरुले तयार गरेको विकेन्द्रीकरण नीतिमार्फत सम्बृद्धि ल्याउने अति दुरदर्शी योजनालाई कार्यान्वयन नै नहुने ढाँचामा लगेर कुहाएर राखियोे । विकासको विकेन्द्रीकरणको मोडेललाई असफल बनाउँदाको परिणाम विकास र अवसरमा विषमता व्याप्त भई सामजिक असन्तोष चरममा पुग्न गयो । जसको फाइदा उठाउँदै देशी–विदेशी तत्वहरुले नेपाल राज्यको मुलआत्मालाई नै समाप्त गरिदिए ।
राणाकाल, पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र चारैकालमा सदैव राज्यको सम्मान प्राप्त व्यक्तिहरुमा बाहुन समुदायका सदस्यहरुको बाहुल्यता छ । एक निष्ठायुक्त व्यक्ति विल्कुल विपरित चरित्रका यी चारओटा शासनकालमा समान रुपमा सम्मानित हुनै सक्दैनन् । तरपनि आफ्नो विनाश आफै राज्ने गैह्रबाहुनहरु यस्ता बाहुनहरुको संगत गर्दै आफ्नो खाडल आफै खन्न तयार हुन्छन् र दुःख सारा समाजले व्यहोर्नु पर्दछ ।
मुलुकको शासनमा बाहुनहरुको हात कम हुँदा वि.सं. १९९० को भुईचालो जाँदाको सारा खर्च नेपालले आफै व्यहोरी छोटो समयमा नै देशको पुनर्निमाण सम्पन्न गरेको थियो । तर राज्यसंयन्त्रमा बाहुनहरुको प्रभाव बढ्दै जाँदा २०४५ सालको भुईचालोमा विदेशबाट सहायता माग्ने क्रम शुरु भयो । २०७२ सालको भुइँचालोमा नेपाल कति निरीह भयो भन्ने विषय सबै सामु जगजाहेर छ ।
नेपालको राज्यसत्तामा बाहुनको प्रभाव नभएका बेला नेपालका मठ मन्दिर, दरवार, नहर, जलविद्युत आयोजना, सडकमार्ग, रेलमार्ग, रोपवे मार्गहरु सबै नेपाली विज्ञहरुले नै निर्माण गर्थे । नेपालको राज्यसंयन्त्रमा बाहुनको प्रभाव बढ्दै जाँदा भौतिक संरचना निर्माणमा विदेशीहरुको प्रभाव बढ्दै गयो । हाल पुरै राज्यसंयन्त्र बाहुनको कव्जामा गएको वर्तमान समयमा हाम्रा पुर्खाले आफ्नै सीप र श्रमले निर्माण गरेका धरोहरहरु आज विदेशीहरुले निर्माण गरिरहेका छ्न । दरबार हाईस्कुल चीनले बनाउँदैछ । हनुमानढोका पनि चीनले बनाउँदै छ । पाटन दरबारको पुननिर्माण जापानले गर्दैछ ।
यही विषयलाई दृष्टिगत गर्दै प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं लेखक डोरबहादुर विष्टले भाग्यवाद र विकास नामक पुस्तकमा नेपालको विकास र प्रगतिको बाधक बाहुनले नेपालमा भित्राएको भाग्यवाद नै प्रमुख हो भनी आफ्नो कितावको सारमा भनेका छन् ।
जब नेपालको राज्यसंयन्त्रमा बाहुनहरु पूर्णरुपमा निषेधित थिए , त्यत्तिबेला नेपालको सीमा (सरहद) भित्र कुनैपनि विदेशीको प्रभाव त के छाँया पनि पर्दैन थियो । जब नेपालको राज्यसंयन्त्रमा बाहुनहरुको प्रभाव बढ्दै गयो, विदेशीहरुको प्रभाव पनि सोही अनुरुप बढ्दै गयो । आज राज्यसंयन्त्र पुरै बाहुनहरुको कव्जामा भएको बेला विदेशी राजदुतावासका कर्मचारीहरु नेपालका वास्तविक शासक जस्ता देखिएका छन् भने राज्यसंयन्त्रमा हालीमुहाली गरेर बसेका विभिन्न पदधारी बाहुनहरु ती दुतावासका कर्मंचारीहरुका आदेश पालन गर्ने सोह्रश्राद्धका बाहुनका रुपमा मात्र सीमित भएका छन् ।
नेपालको राज्यसंयन्त्रमा बाहुनहरु निषेधित हुँदा जनतालाई कर भन्ने शव्द पनि थाहा थिएन । नाम मात्रको मालपोत तिर्नुपथ्र्यो । गैह्रबाहुन शासकहरु जनताको अधिकतम हितलाई ध्यान दिई जनतालाई न्यनुतम भार पर्ने गरी राज्यका नीतिहरु निर्धारण गर्थे । आज नेपालको राज्यसंयन्त्रमा बाहुनहरुको हालीमुहाली हुँदा जनताहरु खोला तरेको, साइकल चढेको, कुखुराको खोर बनाएको, हाटबजारमा लौका–फर्सी बेचेको पनि कर तिर्न बाध्य छन् ।
र याे पनि पढ्नुहाेस्
व्यापार घाटा पौने ९ खर्ब पुग्यो, ओली अर्थतन्त्र धरापमा !
बाहुनहरु नेपालको राज्यसंयन्त्रमा निषेधित भएको कालखण्डमा सत्ताका लागि भारदारहरु आपसमा लड्थे । एउटा भारदार पराजित हुन्थ्यो अर्को भारदार स्थापित हुन्थ्यो, जनतालाई कँही कतैपनि हानी हुँदैन थियो । तर हाल आएर बाहुनहरुको शासनमा जनता–जनता भिडाएर शासनसत्ता कव्जा गर्ने नयाँ सूत्रको प्रयोग भएको छ । पहिला दरवार अशान्त हुन्थ्यो, जनता शान्त हुन्थे, अहिले जनता अशान्त छन् ,दरवारहरु शान्त छन् ।
जसरी दरवारमा बाहुनको प्रवेशले खस साम्राज्य समाप्त भयो, मल्ल शासन विलुप्त भयो, राणा शासन समाप्त भयो, शाहवंशीय राजतन्त्रको अवसान भयो, समाजमा विकृति र विसंगतिमात्र शुरु भयो, त्यही रुपमा र गतिमा नेपालको शासनमा बाहुनहरुको प्रभुत्व र शासन केही समय कायम नै रहने हो भने नेपाल भन्ने देश पनि खस साम्राज्य, मल्ल शासन झैं विलिन हुने निश्चित छ । तसर्थ नेपालमा गैह्रबाहुन जातिहरुले इतिहासका यी दृष्टान्तहरुलाई ध्यान दिई बाहुनको हातमा भएको सत्ता आफ्नो हातमा लिने गरी संगठित हुनुपर्दछ ।
समाजशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार पनि सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र नेपाल एकीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको नेपालको क्षेत्रीले यस अभियानको नेतृत्व लिनुपर्दछ । पाल्पाली युवराज उद्योत सेनले दिएको उपदेश अनुसार नेपालको राज्यसंयन्त्रमा बाहुनहरुको उपस्थितिलाई क्रमश कम गर्दै जानुपर्दछ । नेपालको राज्यसंयन्त्रमा बाहुनको उपस्थिति घट्दै जाँदा नेपालको प्रगति, विकास, कीर्ति र यशमा पनि वृद्धि हुँदै जाने निश्चित छ । किनभने यस हिमवत खण्डमा बाहुनहरुको राज्यसंयन्त्रमा उपस्थिति भएको समयमा यो क्षेत्र इतिहासमै कमजोर र दारुण अवस्थामा पुगेको ईतिहास साक्षी छ भने राज्यसंयन्त्रमा बाहुनहरुको पूर्ण अनुपस्थिति भएको समयमा हिमवत खण्डका राज्यहरु विश्वमै आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्न सफल भएका छन् । नेपाल जोगाउने अब बाँकी यही उपाय मात्र हो ।
गौ र ब्राह्मणको पवित्रताको नाममा हुने अपवित्र कार्यहरुका कारण समाजमा दोहोरो मानक स्थापित भएको छ । नेपालका बाहुनहरुले पनि समाजमा व्याप्त ब्राह्मणको पवित्रताको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्दै आफ्नो आर्थिक लाभका लागि समाजलाई भ्रष्ट र चरित्रहिनताको दलदलमा यसरी लगेर फसाएका छन् ,जसले मुलुकलाई दासताको जंजीरमा फसाउन लागेको छ ।
थप याे पनि पढ्नुहाेस्
Previous articleआज १४ औं लोकतन्त्र दिवस मनाइँदै
Next articleश्रीलङ्का आक्रमण : सरकारले सामाजिक सञ्जालमा किन प्रतिबन्ध !
आइतवारदेखि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः सुरु गर्ने
दोस्रोपटक पनि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यादवकाे स्वाब पोजेटिभ
अनशनरत युवाको भावनालाई अविलम्ब सम्बोधन गर : प्रवक्ता शर्मा
बिध ल्याबको शुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्दा थप २०० छुट !
युवानेता रिजालको गर्जन– कांग्रेस गुट र फुट भएर हैन एकजुट हुन जरूरी
किसान आधुनिक कृषि प्रविधितर्फ आकर्षित
शिक्षा / स्वास्थ्य2287